विवाहपछि धेरैजसो महिलालाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो, तपाईलाई पनि भयो की ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / विवाहपछि धेरैजसो महिलालाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो, तपाईलाई पनि भयो की ?
admin January 30, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 73 Views
विवाह हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण फैसला हो, जुन सोच विचार गरेर मात्र लिनु पर्दछ। धेरै जसो महिला विवाहपछि नयाँ परिवेशमा आफूलाई लैजाने गर्दछन् । यसमा धेरै जसो महिला यस्ता हुन्छन्, जसले पछि गएर आफूले गरेको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्। कुनै समय त उनीहरुलाई विवाह गरेमै पछुतो हुने गर्दछ। आउनुहोस् जानौँ विवाहपछि प्राय महिलालाई कुरा कुरामा पछुतो हुने गर्दछ।
पूर्व पति वा प्रेमसँग तुलना: हुनत कहिले पनि पूर्व प्रेम वा पतिसँग तुलना गर्नु हुँदैन्। कहिलेकाही विवाहपछि महिलाका अघि विभिन्न समस्या आउने गर्दछन्। तब उनीहरुलाई महशुस हुने गर्दछन् की यो भन्दा बरु पूर्व प्रेम वा पति भएको भए राम्रो हुने थियो होला। यस्तो अवस्थामा महिला आफ्नो विवाहको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्।
Previous दुलहा र दुलही बिहे गर्दा गर्दै पछाडि बाट आवाज आयो, केटी धेरै रात मा संग बसेको छ भनेपछि…
Next ६ वर्षीया बालिकाको पेट भित्र साढे एक किलो कपाल, चकित् परेका चिकित्सकले यसरी निकाले